Lix siyaabood oo lagula tacaali karo toogashada iskuulada Mareykanka - BBC News Somali
Lix siyaabood oo lagula tacaali karo toogashada iskuulada Mareykanka
22 Febraayo 2018
Ka dib markii 17 qof oo arday u badan dhawaan lagu dilay iskuul ku yaalla Florida, ma laga yaabaa in tallaabooyinkan hoose ay yareyn karaan dilalka ka dhaca iskuullada?
1. Yaan la shaacinin qofka toogashada sameeyay
Bishii January 2014-kii, Dr Sherry Towers ayaa shir kaga qeyb gashey Jaamacadda Purdue ee Indiana. Isla maalintaasi, meel kale oo qeyb ka ah jaamacadda, Cody Cousins ayaa toogasha ku dilay Andrew Boldt, oo ahaa arday jaamacaddaasi ka tirsan.
Toogashada kadib, shirkii lagu balansanaa waa la baajiyay. Laakiin Dr Towers - oo ah aqoonyahanad ku taqasustay dhiraan dhirinta xisaabaha ee jaamacadda gobolka Arizona - ayaa kolkaa bilawday bal iney ka fikirto dilalaka kala duwan ee dhaca iyo wax ka dhexeeya.
"Toogashadani waa toogashadii saddexaad oo aan mqlay muddo toban maalmood gudahood," ayey tiri. "Tani waxey u muuqataa mid aan caadi aheyn, tiro ahaan marka loo eego dalkan Mareykanka."
Dr Towers iyo kooxdeeda ayaa arrinta isku mashquuliyey, iyagoo ogaadey in marka ay dhacdo toogashada aan loo meel dayin ee iskuul, in ay u badan tahay iney dhacdo mid kale xiligaa mar u dhaw.
Dr Towers ayaan dooneyn in warbaahinta aaney iska indha tirin dil baaxadda leh ee dhacaya. "Dadka waxey xaq u leeyihiin iney oggaadaan waxa dhacaya," ayey tiri.
Sidaa darteed, saynisyahanad ahaan, ma cadeyn karto in la qariyo kuwa dadka laaya magacyadooda iney yareyn karto toogashada saf marka ah iyo in kale. "Waa wax aan caddeyn loo haynin, maxaa yeelay wali horay uma dhicin in qof dad laayay magaciisa la qariyay''.
Lahaanshaha sawirka Faster
Image caption Macallimiin ka qeyb qaadanaya tababarka is difaacidda oo Colorado lagu qabtay 2017
Laakiin, taa badalkeeda waxey qabtaa in diiradda la saaro dhibanayaasha intii lagu mashquuli lahaa ka hadalka dambiilaha, taasoo sida ay qabto hoos u dhigi karta toogashooyinka.
"Marka aan mutjamaca la hadlayo, ama warbaahinta, ma magac dhabo gacan ku dhiiglaha, haddii aaney jirin sabab gaar ah oo arrintaa qasbeysa," ayey tiri.
Cilmi baarista Dr Towers ayaa waxaa isticmaaley Alerrt, oo ah koox ka socota jaamacadda gobolka Taxes, oo baaritaan ku sameynayay "hannaanka kajawaab celinta toogtahada". Waxey wadaan olole ay ku doonayaan in lagu qariyo magaca gacan ku dhiig laha, iyagoo sameeyey halku dhig ah "Ha magac dhabin iyaga".
Dr Blair ma dooneyso in la mamnuuco sheegidda magaca gacan kudhiig layaasha. Ha yeeshee, waxey la tahay in warbaahintu diiradda saarto "haldoorada, bulshada, iyo - dhinacyada kale ee mudnaanta leh sida waa dhibanayaasha".
Wariyeyaasha qaar ee Mareykanka - sida wariyaha ka tirsan Tv-ga CNN-ka ee Anderson Cooper - iyo baro kale oo internet-ka ah, ayaa haatan isla qaatey inaaney magac dhabin gacan ku dhiiglayaasha magacyadooda.
2. Macallimiinta hub ha qaataan
Toogashadii ka dhacdey dugsiga Hoose/Dhexe ee Sandy Hook, bishii December 2012-kii, ayaa waxaa lagu wargaliyey ciidanka booliiska 9.35 barqanimo. Saraakiisha ayaa gaarey goobta afar daqiiqo kadib, isla daqiiqad gudaheed; waxey maqleen dhawaq xabad oo aheyd xabad uu isku dhuftay gacan kudhiiglihii falka geysanayey.
Ka hor intiuusan is dilin wuxuu laayay labaatan caruur ah, iyo lix qof oo waa weyn
"Haddii iskuuladu xalkoodu uu yahay kaliya iney ku tiirsanaadaan caawimaad uga timaada dibadda, ma jiri doonaan waligeed wax ka badalan oo wanaagsan, wixii aynu aragnay eek a dhacay iskuulka Sandy Hook ," ayey tiri Joe Eaton.
Eaton, waxey ka tirsan tahay milkiilayaasha hubka ee Ohio. Waxay billowday barnaamij lagu tababarayo macalimiinta gaar ahaan sidii ay u wajihi lahaayeen haddii iskuul ay ku sugan yihiin ay lasoo gudboonaato toogasho saf mar ah.
Barnaamijka waxaa qeyb ka ah gargaarka degdegga ah , in dad tiro ay meel inta ka baxaan, goob kale u wareegi karaan, sida loo isticmaalo qoryaha iyo bistooladaha . Waxay u aragtaa in qaabkaa la isaga dhicin karo, marka uu iskuul soo galo qof baastoolado iyo qoryo ku hubeysan.
''Ilaa iyo hadda, waxaa mashruucaas lagu tababaray shaqaale iskuul oo gaaraya 1,300, iyadoo la siiyey koorso soconeysa saddex maalmood. "Macalimiinta, madaxda, maamulayaasha, darawalada basaska iyo sidoo kale haweeneyda ardeyda u diyaarisa qadada," ayey tiri Easton.
Dalka Mareykanka gudihiisa, toban gobol ayaa ka mamnuucay iskuuladooda hubka. Sideed gobol oo kale, ayaa hubka u oggol in lagu dhaafo baabuurta dhexdooda. Laakiin 32 gobol oo kale, way qaadan karaan macalimiinta, waase haddii iskuulku u oggolaado.
3. In loo sameeyo fasal waliba labo albaab
Markii qof ku hubeysan qori uu weerarey dugsiga saree e Douglas toddobaadkii ina dhaafey, David Hogg ayaa ku dhuuntey qol cuntada loogu kariyo ardeyda.
Isagoo ku dhex dhuumanaya mugdiga, 17 jirka ayaa oggaadey in qolku leeyahay labo albaab. "Haddii gacan ku dhiiglaha uu soo gali lahaa qolka,"wuxuu ku fikirayey,"waxeynu ka bixi karnaa albaabka kale."
Habkii uu u fikiray waxa la dhacdey soo dhoweeyeyna khuburada.
"Weerarada aadka looggu baaba'ayo waxaa inta badan ugu wacan, in dad fara badan oo aan waxba iska difaaci karin iney kudhex xayirmaan qol yar ama goobo ciriiri ah," ayuu yiri Dr Pete Blair oo ka tirsan hey'adda Alerrt.
"Waxyaabo fudud baa jira, sida sameynta fasalo leh labo albaab, oo haddii qof hubeysan kasoo galo ay ka bixi karaan dadku midka kale, iney ka qeyb qaadan karto badbaadinta shacabka. Ma ahan tani mid kahor tageysa in weerar dhaco - inkastoo ay suurgal tahay - laakiin waxey yareyn kartaa khasaaro balaaran oo dhici lahaa."
4. Kahor joogsiga dadka qaar inay hub qaataan
Bishii May 2014-kii, Elliot Rodger - oo ah 22 jir ah oo ku dhashey magaalada London, ayaa ku diley lix ruux goobta la yiraahdo Isla Vista, oo katirsan gobolka California. Sargaal katirsan maamulka Isla Vista, ayaa ku tilmaamey gacan kudhiig lihii falkaasi sameeyey mid maskaxdiisu ay qabtey waxyaalo aad u balaaran.
Afar bilood kadib, sharci dajiyayaasha gobolka California ayaa soo saarey sharci dhigaya xakameynta hubka. Sharcigu wuxuu u oggolaanayaa xubnaha ka tirsan qoyska, dadka guri isla dagan ama booliis, in ay ka dalban karaan garsoore inuu kala noqon karo dad hub heysta oo misana maskaxda looga jira.
Image caption Dad ka baxsanaya iskuul ay toogasho ka dhacday
Waxaa jira sharci ay soo saartey dowladda dhexe, kaasoo ka mamnuucaya dadka horey ay ula soo darseen xanuun dhimirka ah inaan laga gadi karin hub - laakiin maahan mid adag.
Inaad ka gadato hub qof heysta ruqsadda dowladda, ama uu kaa iibiyo waa inaad marka hore soo martaa baaritaan caafimaad. Haddii uu natiijada isbitaalka qaabilsan maskaxda uu kugu soo saaro jiro, markaa waxaad ku guul dareysatey in sharciga uu ku oggolaado in hub laga gado.
5. Iskuulada oo loo sameeya qaabka Ammaanka garoomada diyaaraha
Iskuulada qaar ee dalka Mareykanka waxey leeyihiin qalab lagu baaro dadka soo galaya iskuulada. Sanadkii 2014-kii, ku dhawaad 8.7% celcelis ahaan dugsiyada sare ayaa isticmaalay qalabkan."
Laakiin khabiir ku takhasustay dhanka ammaanka Ken Trump, ayaa shaki ka muujiyey inuu joojin karo iyo in kale toogashada ka dhacdo iskuulada qalabkan wax baara.
Wuxuu farta ku fiiqay in iskuulada ay inta badana, ama maalintiiyoo dhan furan yihiin, iyo maalin waliba.
"Sidaa darted, waa in uu shaqeeya qalabkan baaritaanka 24 saac-kii ee maalintii, iyo toddoba maalmood ee toddobaadka," ayuu yiri Trump. "Ama qof ayaa u imaan kara ciyaaridda Kubadda Koleyga fiidkii, intuu meel ku xaseysto, ayuu markaa kadib usoo noqon karaa aroortta xigta si uu qorigisii gudaha ugala soo baxa."
6.- Is badal lagu sameynayo sharciyada hubka
Dadka heysta hubka xuquuqdooda waxaa dhawraya sharci ku qoran dastuurka Mareykanka. Sharcigan, waxaa la ansixiyey 1791-gii, taasoo dadka Mareykanka u oggolaanya xuquuqda "ay ku heysan karaan, kuna qaadan karaan hub".
Dastuurkuse waa wax la abdali kara.
Is badal lagu sameeyo sharci, waxaa soo jeedintiisa iska leh Congress - marka saddex dalool laba dalool ay taageerto - ama laba dalool gobolada. Is badalka, markaa kadib waa iney ansixiyaan saddex dalool gobolada.
Image caption Booliska oo xirya waddada gasha iskuul sare oo dad lagu laayay
Sharciga hubka oo muran weyn ka dhaliyay dalka Maraykanka
ka dib toogashadii ka dhacdey gobolka Florida, dadka qaarkii ayaa soo jeediyey in sharciga oggolaanshaha hubka la joojiyo.
"Inta badan sharciga lagu xakameynayo hubka waa kuwo aan meel mar aheyn, marka inta badan dadka uu dastuurku u oggolaanayo xaqa ay ku gadan karaan hubka wax baabi'iya illaa iyo tiro aan cayinayn," waxaa sidaasi ku qorey wargeyska New York Times Bret Stephens.
Laakiin ma ahan oo kaliya dastuurka dowladda dhexe ee Mareyakanka kan oggolaanayo qaadashada hubka, waxaa sidoo kale oggolaanayo in hubka la qaato dastuurka 44 gobol oo katirsan dowladda federaalka Mareykanka.
Sharciga oggolanaayo in shicibku hub qaato Mareykanka dhaxdiisa waxey ka abuurtey dood weyn, kadib markii ay in badan soo noqnoqdeen waxyeelada dadweynaha heysta hubka.
Waxaa aad uggu dhagan oo taageera sharciga oggolaanshaha hubka xisbiga Jamhuurigga, kaasoo uu katirsan yahaya madaxweynaha talada haatan haya ee Mareykanka Mr. Donald Trump.